Intshayelelo kunye nokusetyenziswa komatshini wokudlulisa umatshini wokudubula ogqitha | Ding Tai
Intshayelelo kunye nokusetyenziswa komatshini wokudlulisa umatshini wokudubula
Intshayelelo kunye nokusetyenziswa komatshini wokuqhushumisa wokudubula
Umatshini wokuqhushumba Shot luhlobo lwetekhnoloji yonyango yokugqabhuza isanti yentsimbi kunye nesinyithi sokudubula kumphezulu wento yezinto ngesantya esiphezulu ngomatshini wokudubula. Xa kuthelekiswa nobunye ubuchwephesha bokunyanga ngaphezulu, buyakhawuleza, busebenze ngakumbi, kwaye bungagcina okanye bukhonkxe inkqubo yokuphosa.
Iinkampani zaseMelika zenze umatshini wokuqala wokudubula emhlabeni ngo-1930s. Ukuveliswa kwe China ngesixhobo sokudubula kuqalise ngeminyaka yoo-1950, ubukhulu becala kukopa iteknoloji yangaphambili yeSoviet Union.
Oomatshini bokuqhaqha ngokuqhushumisa banokusetyenziselwa ukususa iir burs, isikali kunye nokugqwala okunokuthi kuchaphazele ukuthembeka, imbonakalo, okanye inkcazo yeenxalenye zezinto. Umatshini wokudubula wadubula usenokukhupha izinto ezingcolisayo kumhlaba ophakathi kunye nokubonelela ngeprofayili yomphezulu eyonyusa ukubambelela kwento yokudibanisa ukuqinisa indawo yokusebenza.
Umatshini wokuqengqeleka wokudubula
Umatshini wokuqhuma udubule wahlukile kumatshini wokuchola wento kuba usetyenziselwa ukunciphisa ubomi bokudinwa kwenxalenye yokwandisa uxinzelelo olwahlukileyo lomhlaba, ukonyusa amandla wenxalenye, okanye ukuthintela ukuqina.
Izixhobo zokuqhushumba Shot kuqala zisetyenziswa kwicandelo lokukhupha ukususa isanti yomhlaba kunye nesikhumba se-oxide yesinyithi kunye ne-iron iron.
Phantse konke ukuphoswa kwensimbi, ukuphoswa grey, iziqwenga zentsimbi ezinokubakho, iziqwenga zesinyithi ezincinci kunye nokunye kufuneka kudutyulwe kuqhume. Oku akunakususa ulusu lwe-oxide kuphela kunye nesanti kumhlaba wokuphosa, kodwa nenkqubo ebalulekileyo yokulungiselela ngaphambi kokuphonononga ukuhlolwa komgangatho. Umzekelo, ngaphambi kokuhlolwa okungonakalisiyo kokwenza i-injini enkulu yegesi, ukucocwa kokudubula okungqongqo kufuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukuthembakala kweziphumo zovavanyo.
Kwimveliso yokuphosa ngokubanzi, ukucoca iibhulorho kuyinkqubo ebalulekileyo yokufumana isiphene somhlaba njengee-subcutaneous pores, imingxunya ye-slag, isanti, ukufakwa okubandayo, ukukhonkxa njalo njalo.
Ukucocwa komhlaba ongaphezulu kwengqekembe yentsimbi, njengokufana ne-aluminium alloy kunye ne-alloy yobhedu, ukongeza ekususeni isikhumba se-oxide kunye nokufumana iziphene zomphezulu wokuphoswa, eyona njongo iphambili kukudubula ukuze kususwe ukuhanjiswa kwezinto zokufa kunye nokufumana umgangatho womgangatho ngokubaluleka komhombiso , ukuze ufumane iziphumo ezibanzi. Kwisinyithi yentsimbi kunye nokuveliswa kwensimbi, ukudubula kuqhushumbo okanye ukuthathwa yinkqubo yoomatshini okanye ikhemikhali yokususa ulusu lwephosphorus ukuqinisekisa ukuvelisa okuphezulu kwimveliso yentsimbi.
Ekuvelisweni kweshidi yensimbi yesilika, ishiti yensimbi engenanto kunye nezinye iipleyiti zentsimbi kunye nemitya, ukudubula kuqhushumbo okanye unyango lokuthathwa kufuneka kwenziwe emva kokunkqonkqoza kwinkqubo yokuqengqeleza okubandayo ukuze kuqinisekiswe ubungqindilili bomhlaba kunye nokuchaneka kweepleyiti zentsimbi ezijikelezayo.
Izixhobo zokuqinisa ukomeleza
Ngokwe ithiyibhile yensimbi yanamhlanje, ukonyusa uxinaniso lwangaphakathi kwindawo yentsimbi yeyona ndlela iphambili yokuphucula amandla esinyithi.
Kuqinisekisiwe ukuba ukuqhushumba ngokudubula yindlela efanelekileyo yokunyusa isakhiwo. Oku kubaluleke kakhulu kwezinye iinxalenye zetsimbi ezinokuthi zingabi lukhuni ngokutshintsha kwesigaba (njengokuqiniswa kwesibindi) okanye zifuna ukuqiniswa ngakumbi kwisiseko sokuqiniswa kwesigaba sokutshintsha.
I-Aviation, ishishini le-aerospace, iimoto, itrektara kunye namanye amalungu afuna umgangatho wokukhanya, kodwa iimfuno zentembeko ziya zisihla nangaphezulu, inyathelo elibalulekileyo lobuchwephesha kukusebenzisa itekhnoloji yokudubula ukuze uqinise amandla kunye nokukhathala kwamalungu.
Ixesha lokuposa: Jul-18-2020
Dubula Umatshini Wokutshula, Shot Blasting Turbine, Umatshini wokuqhushumba Shot, ukudubula kuqhuma iindawo zokuSebenzisa, I-Shot Blasting Wheel, H umatshini wokudubula uqhushumbe, Zonke iimveliso